2014 Zororo Masocial Media Kushambadzira Zvinoitika | Martech Zone
2014 Zororo Yemagariro Media Kushambadzira Maitiro
Mugovera, Gunyana 27, 2014 Svondo, Gunyana 28, 2014 Douglas Karr
Zvinoita sekunge ino ichave iri nguva yakakura yezororo yeFacebook, kupi 92% yevatengesi kutarisira kushandisa yakawanda yavo yemari kushambadzira bhajeti! Pakazara, vatengi vanotarisirwa kushandisa masere masere muzana gore rino kupfuura zvavakaita gore rapfuura - $ 8 bhiriyoni. Uye vashambadziri vari kunyatsoona zvemagariro sechinhu chikuru sosi yekuwedzera musika wavo!
Mwaka wekushambadzira wezororo wa2014 wave kuda kusvika! Kana iwe wakaita sesu, iwe watove mukutenderera kuzere kuronga zvirongwa zvako zvehoridhe. Saka wadii kutora danho kumashure uye woongorora izvo vamwe vatengesi vari kufunga nezve ino nguva yezororo pasocial? Dzidza uko vatengesi vari kuisa mari, ndeapi maratidziro ari kubuda sevatambi vemasimba, ndeapi vatengesi zvinangwa zvekutanga zvemagariro uye nezvimwe. Rob Manning, Kupa
Offerpop iri kushandisa iyi infographic kukanda chirongwa chitsva cheemail apo vatengesi vanogona kusaina uye tora mwaka wekushambadzira kurudziro mubhokisi rako rekunyora. Iyo yemahara yezvinyorwa zvakateedzana zvinopa dhijitari uye zvemagariro matipi uye maitiro iwe aunofanirwa kuziva kune Nhema Chishanu uye kupfuura Tora infographics, mishumo yekutsvaga, zvirongwa zvekushambadzira, tarisa mabhuku, uye nezvimwe, gore rese.
Tags: digital marekting matipiecommerce kushambadziraecommerce tsvagiridzoemail matipimatipi ezororozororo maitiroofferpopkupamba manningsocial media kushambadzira matipizvemagariro matipi